Bogga Qorahey oo Laga Yaabo in Dhakhso Loo Xidho – Rasaasa News
Oct 26, 2009 Cabdi Iley, Itobiya, Jwxo-shii, Qorahey.com
Bogga Qorahey.com oo ka mid ahaa boggaga ugu beenta badan ee wax ka qora arimaha Jwxo-shiil, ayaa waxaa soo foodsaartay dhibaato xoog leh oo dhaqaale, taas oo kaga imanaysa dhinaca Kaalinka 5aad, gaar ahaana Ina Iley.
Sida ay xaqiijinayaan war rasmi ah oo ka soo baxay dhanka Kaalinka 5aad, ayaa waxaa Bogga Qorahey.com, maal galin jiray Cabdi Maxamed Cumar [Cabdi Iley], boggan oo kolkiisii hore ahaa bogg madaxbanaan, ayaa waxaa lagu maal galiyey in uu noqdo mid ku hadla Afka Jwxo-shiil, dabayaaqadii sanadkii 2005, isaga oo wata magac gabal arintaas oo ka fog wanaaga dadka gabalka dega, waxaana uu boggani dusha saartay hawlihii ay qaban jiray bogga Ogaden.com oo ay hore u lahayd Jabhada ONLF, kolkii dambase Jwxo-shiil uu saldhig ka dhigtay.
Sababta Qorahey.com looga dhigay mid ku hadla afka Jwxo-shiilada, ayaa ahyd mid looga dan lahaa in Indhaha xukuumada Itobiya, si toos ah loogu jeediyo dadweynaha ku nool gabalka Qoraxey, wayna dhacday oo runtii gabalka Qoraxeey waxaa uu noqday gabalada ugu dhibaatada badan.
Hadaba, su,aashu waxay tahay yaa arintan ka dambeeyey, yaase hir galiyey? Waxaa arintan si wada jir ah uga shaqeeyey Mxamed Ismaaciil Cumar iyo Cabdi Maxamed Cumar, waxaa Cabdi Maxamed Cumar uu soo dhameeyey in uu miisaaniyada uga helo Kaalinka 5aad hawl wadeenada ka shaqeeya bogga Qorahey.com. Maxamed Ismaaciil waxaa uu soo dhameeyey in ninkii hore u lahaa bogga lagu qanciyo in uu u shaqeeyo Jwxo-shiil, laguna meheriyo Islaan ay Jwxo-shiil isu oday sheegtaan. Wiilka Islaanta lagu afduubay waa nin dhulka qorahey geed geed u kala yaqaan, maadaama oo uu hore ugu soo jabhadeeyey dhulkaas isaga oo xiligaas AL-itixaad aha, waxa looga baahan yahay waa in uu sheego magacyada tuulooyinka iyo ceelasha ku yaal gabalka Qorahey si maalin walba loogu qoro bogga in uu dagaal ka dhacay.
Arintani waxay keentay in laga suuliyo Kaalinka 5aad dhamaan masuuliyiintii u dhashay gabalka Qorahey, maadaama uu gabalku ka mid yahay meelaha ay ugu xoog badan tahay Jabhadu. Xitaa waxaa gabalka laga caydhiyey dadkii loo doortay in ay Kaalinka 5aad u matalaan baarlamaanka Degaanka Somalida, arintan oo muddo badan socotay ayaa waxay maanta u egg tahay in ay soo gabogaboobayso.
Waxaa la xaqiijinayaa in bogga Qorahey.com, laga jaray miisaaniyadii laga siin jiray Kaalinka 5aad, maadaama ay Cabdi Iley ku socoto eedayn dhan ka ah, oo ay wadaan dhamaan masuuliyiinta Kaalinka 5aad, maadaama uu dad badan oo ka mid ah masuuliyiinta Kaalinka 5aad, uu si aan munaasab ahayn u dhibaateeyey isaga oo ula kaashaday saraakiisha ciidamada Itobiya ee gabalka masuulka ka ah.
Inkasta oo bogga haatan ay masuul ka tahay gabadha gabayda Roda Afjano, ayaa hadana waxaa joogsatay miisaaniyadii kaga iman jirtay Kaalinka 5aad, ayaa waxaan la garanaynin mudada uu sii wadi karo arimihii beenta ahaa ee uu ka qori jiray gabalka Qorahey, isaga oo u adeegaya Jwxo-shiil.